Antiviral लागूपदार्थ - आफ्ना संरचना वा विकार हानिकारक द्वारा भाइरस कार्य लागूपदार्थ अत्यावश्यक कार्यहरु।
हाल यस्तो लागूऔषधको पर्याप्त संख्या विकास गरे। ती सबै pharmacological कार्यहरूको विशेषताहरु द्वारा र विशिष्ट चिकित्सा सङ्केत गर्छ लागि वर्गीकृत छन्। निम्न समूह आवंटित : antiviral एजेन्ट को प्रसार स्पेक्ट्रम antiherpethetical, protivotsitomegalovirusnye, इन्फ्लूएंजा, विरोधी-retroviral। लागूऔषधको पहिलो प्रकार को सबै भन्दा राम्रो ज्ञात प्रतिनिधिहरु "ribavirin" र "Lamivudine" छन्। यी औषधिहरू कार्य को जटिल तंत्र, कमी सम्बन्धित छ nucleic एसिड को भाइरस को इन्जाइमहरु गर्न बाध्यकारी द्वारा। यी लागूऔषधको आवेदन नाम क्षेत्र रूपमा एकदम व्यापक छ र धेरै डीएनए समावेश - र शाही सेना-समावेश भाइरस पीसी गरेको सिंड्रोम कारण छ कि, ज्वरो Lasa, hepatitis सी, र एड्स।
Antiherpethetical लागूपदार्थ चार धन, जो आफ्नो morphological संरचना nucleoside एनालग acyclovir द्वारा, penciclovir, famciclovir, valacyclovir प्रतिनिधित्व छन्। अन्तिम दुई औषधिको खुराक प्रकारका निष्क्रिय छन्। मानिसहरूलाई तिनीहरूले acyclovir र penciclovir रूपान्तरित छन्। यो आफ्नो नजिक morphological र histological गुण हुन्छ।
acyclovir को कार्य को संयन्त्र whereupon आफ्नो विकास चक्र interrupts को भाइरल इन्जाइमहरु संग अन्तरक्रिया, छ। परिणाम रोगजनक विनाश छ। यो अन्तरक्रिया एक एनालग dezoksiguanedina (प्यूरिन nucleoside) छ जो acyclovir को संरचना, द्वारा प्रदान गरिएको छ। दबाइ सबैभन्दा संवेदनशील भएको छ herpes सिमप्लेक्स भाइरस। यस दबाइ गर्न प्रतिरोधी हो जो सूक्ष्मजीवहरु को उपभेदों छन्। यो प्रभाव immunosuppressive चिकित्सा को प्रयोग द्वारा बताए गर्न सकिन्छ। प्रतिरोध को संयन्त्र दबाइ को विशिष्टता परिवर्तन, भाइरस इन्जाइम प्रणाली को उत्परिवर्तन छ। यस्तो अवस्थामा को घटना मा अन्य pharmacological समूह ( "Foscarnet") को लागूपदार्थ छन्। बच्चाहरु antivirals "Valacyclovir।" समावेश उच्च bioavailability, कारणहरू समान प्रभाव पचास भन्दा बढी प्रतिशत छ जो। यो प्रभाव हासिल गर्न (जब "Acyclovir" संग तुलना) यो दबाइ को धेरै सानो खुराक आवश्यक हो।
penciclovir को कार्य को संयन्त्र समूह को तयारी देखि व्यावहारिक कुनै फरक छ। यो पनि संश्लेषण DNKmikroorganizma उल्लङ्घन गर्छ। तर, यो कि हदसम्म यो Varicella-Zoster भाइरस (VZV) असर मा अलग छ।
protivomegalovirusnym दबाइहरु "Ganciclovir", "Valganciclovir", "Foscarnet", "Cidofovir", "Fomiversen" समावेश गर्नुहोस्। तिनीहरूले microorganism को डीएनए polymerase को प्रतिस्पर्धी निषेध समावेश जो एक बरु जटिल कार्य को, संयन्त्र छ। यो अन्तरक्रिया को परिणाम यसको मृत्यु जान्छ कि डीएनए श्रृंखला को बढाव को contravention छ। यो pharmacological समूह अर्थ - cytomegalovirus संक्रमण लक्षण हटाउनु भनेर सबैभन्दा antiviral लागूपदार्थ। तथापि, दबाइ प्रतिरोध को पछि लामो समयसम्म प्रयोग केहि प्रयोगको दायरा कम जो, विकास हुन सक्छ।
Antiviral लागूपदार्थ मानव इम्यूनो भाइरस मा एक प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। तसर्थ, यस्तै कार्य छ जो केही औषधि, एन्टिरिट्रोभाइरल समूह संयुक्त। तिनीहरू सबै कार्य एक जटिल संयन्त्र जीव को इन्जाइम प्रणाली, यसको प्रतिकृति उल्लंघन को blockage संग सम्बन्धित छ छ।
दबाइ 'Vazokardin': प्रयोगको लागि निर्देशन
चिकित्सा "Tsinkteral": ग्राहक समीक्षा
विश्व संस्कृति को भाग रूपमा इटाली को संस्कृति
टेक्नोपोलिस हो ... जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरूमा "टेक्नोपोलिस" शब्दको अर्थ
र यदि हामी jellied कुखुरा तयार छैन?
BAA "Anantavati": निर्देशन, मूल्य, समीक्षा
आदर्श बिस्कुट आटा: खाना पकाउन रहस्य
पत्रकारिता "GONZO" - त्यो छ, कसरी र त्यहाँ एक रचनात्मक-दिमाग जवान मान्छे जस्तै थियो किन?
अंगूर काटिन्छ। कटाईबाट अङ्ग्रेजी। कहिलेकाँखेर अङ्गुरका कट्टरहरू कदर गर्ने?
झिंगा: प्रजनन र व्यापार रूपमा हुर्काउन
मोन्टेनेग्रो, Kamelia 2: * फोटो, मूल्यहरु र समीक्षा